Ngaba uke wambona umfanekiso onjalo: kukho amantombazana amabini, enye enye ikopi ecacileyo yesibini. Ngaphezu koko, kubonakala ngokucacileyo ukuba ngubani na owokuqala, kwaye ngubani-kuphela kuphela inkohliso phantsi kwayo. Enye intombazana ihlala ngokukhululekile, icinga kwaye isebenze ngokukhululekile, okwesibini - ixelisa ngomgudu, ngeentlungu. Kwiengqondo-nkcukacha kukho ixesha elinjalo-uvelwano. Uvelwano luvela kubantu abanentsingiselo, abanentsingiselo abanokwenza isibuko apho abanye abantu, iimpawu, izenzo, iimvakalelo kubonakala. Kuthekani ukuba wenza njengesibuko? Indlela yokulahla ukuxhomekeka oku?
Fumana ulwahluko 10.
Okokuqala, kufuneka uvume ukuba awunjalo, kungakhathaliseki ukuba kuhle kangakanani. Umzekelo wokumxelisa uya kuhlala uhlala kude. Ingaba i-end of the plagiarist yesazisi somnye umntu - yiyo yonke into oyifaneleyo?
Amantombazana amaninzi acinga ukuba: "Andiyinto enhle, kungeyena ohlakaniphile, kungekhona ngempumelelo, andinayo inkathazo, enjalo imilenze yamakhanda." Ewe, kodwa kukho into enokuthi isithixo asinayo.
Kukulungele ukujonga kakuhle wena kunye naye kwaye ujonge ukungafani okuthethayo.
Ngokomzekelo, kuwo amadoda agcina ingqalelo, kunye nawe - kakhulu kuninzi. Ewe, kodwa akudingeki ukuba ufumane ubuhlobo rhoqo, udideke kumagama, imihla, iifowuni. Kwaye akuyona into yokuba abameli abakhulu kunabo bonke abanesondo esomeleleyo "bayakuxuba."
Khangela inzuzo kuwe. Mhlawumbi uneetalente ezininzi kunye nezakhono ozifunayo ukuze ubenze zibonakala ngakumbi.
Zama ukungafani neentombi zakho. Wena kunye nabantu abahlukeneyo, kodwa, ekubeni ungumhlobo, ngoko unento efanayo. Le "nto" isele ibonakale, ngoko umsebenzi wakho kukugxininisa ukungafani. Khetha indlela eyahlukileyo yokugqoka, ulungele ukuziphatha kwakho, ungesabi ukubonisa indlela yakho yokuzonwabisa kunye nemikhwa.
Nangona unayo yonke into efana nayo yonke into, kungekhona ukuba izinto, imikhwa, amadoda afana nawe.
Kuye kwenzeka ukuba ngoku ube yinkokheli kwintsebenziswano yakho. Kule nto ayikho into embi, kwenzeka. Abantu abaninzi baphila bonke ubomi babo kwimigqaliselo yesibini kwaye oku akuyena uphawu lokulahleka. Kodwa ngobudlelwane, xa ukopisha umntu ngokuzikhethela, kungcono utshintshe izinto eziphambili. Vumela intombi yakho ibe yinto engcono kakhulu kwinto ayeyiyo ngoku. Zama ukuyeka ukuphuhliswa kwaye uphile into engekho nje kwiminqweno yakhe.
Ukuba uzibonakalise, uya kuzivumela ukwenza enye into, ngaphandle kokukubophayo, unamathuba amaninzi okuphumelela. Impumelelo yokubonakalisa ukuzithemba, kunye nomntu ozinzile-lo bubuntu obuzimeleyo, okungekho mfuneko yokuba ikopi engumntu.
Kwenzeka ukuba, nangona zonke iinzame, akunakwenzeka ukulahla ukuxhomekeka okunjalo. Okanye umhlobo, xa ecinga ukuba uhamba phantsi kweempembelelo zakhe, uqala ukubonisa umsebenzi ophawulekayo ukugcina usondele ngaphandle kweenguqulelo.
Yilungele oku. Ukuba intombi iphikisana nawe ukuzama into entsha, wazibonakalisa entweni onokuyenza ibe ngcono kunayo, ukuba uyayivuma amazwi abalulekileyo, uhlekisayo kwidilesi yakho, cinga, kodwa ngaba unobungane? Ngaba ufuna umntu onjalo?
Ngamanye amaxesha kungcono ukuphula zonke iintsebenziswano ngokukhawuleza, ukuphuma kuloo mpe mbelelo kwaye uqalise ubomi obutsha obujikelezwe ngabantu abatsha.
Ngokuqhelekileyo, ukuzihlukanisa kwinto kunokuhlala kuyingozi, nokuba ngumsebenzi, umntu, iingcinga, iimvakalelo. Ubomi bunokunika uninzi ngakumbi xa ubheka konke ukuhluka kwaso ngamazwi avulekile. Kufuneka uhlale unokukhetha kunye nethuba lokuthelekisa, kuphela ke unokwenza izigqibo ezifanelekileyo kwaye uzive ukhululekile kwabanye abantu.
Abafazi - intuition okanye umqondo wesithandathu?
Ungayeka njani ukuxakraza kwaye ufunde ukuzithandayo?
Ukunyamekela kunye nomzimba wakho
Iindinyana ukususela ngoMeyi 9 iintsuku zoLutsha lweNtshontsho, elifutshane, kwiinyembezi, abantwana. I-SMS emfutshane ukususela ngoMeyi 9 kwindinyana - ndivuyisana ngabadala-ntloko-nootatomkhulu
Ukuba umntu akawuthathi ifowuni emva kwengxabano
Kunokuba uphulukise umkhuhlane kumntwana
Izilwanyana kunye ne-crawfish
Ukulimala utywala kunye notywala kwimpilo yabantwana
Iifoto zokuqala zomtshato womntwana oneminyaka engu-84 ubudala u-Ivan Krasko zivele
Kuphi ukuphumla umfazi onesizungu